Maleeshiyaad hubeysan oo rasaasay gaari dad shacab ah ay saarnaayeen – Somali Top News
December 8, 2019 Somali Top News	0 Comments Maleeshiyaad hubeysan oo rasaasay gaari dad shacab ah ay saarnaayeen
Faah faahino dheeraad ah ayaa waxaa ay kasoo baxayaan maleeshiyaad hubeysan oo gaari dad Shacab ah ay saarnayeen xalay Saqdii Dhexe ku rasaaseeyey deegaano ka tirsan gobolka Mudug raasaastaas oo geysatay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah.
Gaariga la rasaaseeyey oo ahaa nooca loo yaqaano Barabokista ayaa ka yimid deegaanka gelinsoor ee Gobolka Mudug,waxaana uu kusii jeeday Magaalada gaalkacyo,waxaana Goobjoogayaal ay sheegeen in 4 ruux oo hubeysnaa ay gaariga rasaaseeyeen.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in rasaasta gaariga lagu furay uu ku geeriyooday hal ruux halka laba qof oo kale ay ku dhaawacmeen,waxaana la sheegay in maleeshiyaadka falkaasi geystay ay goobta ka baxsadeen.
Ilaa iyo hadda macada sababta gaarigaas loo rasaaseeyey iyo dadka ka dambeeyey falkaas,waxaana uu noqonayaa falkii labaad ee muddo todobaad Gudihiis ah ka dhaca wadada u dhaxeysa deegaanka Dagaari ee Gobolka Mudug iyo Magaalada gaalkacyo.
Taliyaha qeybta Booliska Gobolka Mudug ayaa sheegay in ay ku raad joogaan maleeshiyaadka ka dambeeyey gaariga la rasaaseeyey,isla markaana ay wadaan howlgallo ay ku baadi goobayaan.
Weerarkaan sababay khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac ee ka dhacay Gobolka Mudug ayaa waxa uu kusoo aadayaa xilli Colaad beeleed ay ka jirto deegaano hoostaga degmooyinka Afbarwaaqo iyo Towfiiq ee Gobolka Mudug.
← Ra’isul Wasaare ku xigeenka” waa inaan ka fekernaa muddo xileedka nagu haboon 5 sano, 6 ama 7 sano”
Shacabka Baladweyne oo ka barakacaya Fatahaad hor leh oo Wabiga sameeyay →
Meydadka Dad Oromo Ah Oo Laga Helay Magaalada Boosaaso
Wafdi Ka Socday Dowladda Swedan Oo Soomaaliya Kala Hadlay Arimaha Horumarka Dalka